संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न दिएको निर्देशन अस्वीकार्य छः काँग्रेस
काठमाडौं। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्देशन दिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न मातहतलाई दिएको निर्देशन संविधानको मर्म विपरीत भएको काँग्रेसले जनाएको छ।
असोज ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मातहतका निकायमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न परिपत्र गरिएको थियो। त्यसको स्थानमा ‘नेपाल’मात्रै लेख्न कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले मातहत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लेखेका छन्, ‘होसियार! संविधानको मर्मत विरुद्धको कर्म ठाडै अस्वीकार्य छ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान निर्माणको प्रतिबद्धताप्रति सचेत गराएका छन्। शर्माले भने, ‘जेल बस्दाको सिद्धान्त सम्झने कि संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिबद्धता ?’
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्को ठुलो एक्सन लिन्छु’ भनेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको एक्सन नसहने टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलालाई पदका लागि होस नगुमाउन चेतावनी दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई अर्को ठुलो एक्सन लिन्छु भनेछन्। नेकपाको दलभित्रै सीमित हुने एक्सनको बारेमा केही भन्नु छैन। तर, जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको एक्सन हो भने सहन सकिँदैन।’
सुनको मूल्य कति पुग्यो ?
दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न मेरो प्रयत्न रहन्छः श्रृंगला
काठमाडौं आइपुगे भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला